ပွေး … ပွေး … အစှမျးကုနျ ပွေး … ။ - Business Centric Network (BCN)
ပွေး … ပွေး … အစှမျးကုနျ ပွေး … ။
September 10, 2018 September 6, 2018 San Thida
? ယုန်ကလေးပေးတဲ့ ဒဿန
တစ်ခါက … မိန်းမ အလွန်ကြောက်ရတဲ့
ယုန်ပစ်မုဆိုး တစ်ယောက် ရှိတယ် ။
မုဆိုးရဲ့ မိန်းမက သူ့ယောက်ျားကို မယုံဘူး။
ရလာတဲ့ ယုန်အရေအတွက်ကို တိတိ ကျကျ သိနိုင်ဖို့ မိုးလင်းပြီ ဆိုရင် ယုန်ပစ် ထွက်ဖို့
? မြား ဆယ်စင်း ၊ ထန်းလျက် ဆယ်လုံး ၊
ယုန်ကောက်ဖို့ အမဲလိုက်ခွေး တစ်ကောင် ?
ပြင်ပေးထားလေ့ ရှိတယ် ။
ဆိုလိုတာက မုဆိုးက လက် အရမ်းဖြောင့်တဲ့သူ ဖြစ်လို့
မြားတစ်စင်း ဆိုရင် ယုန်တစ်ကောင် မှန်လိမ့်မယ် ။
အမဲလိုက်ခွေးကို သွားကောက် ခိုင်းပြီး ဆုအဖြစ်
ထန်းလျက် တစ်လုံး ကျွေးရမယ် ။ မြားဆယ်စင်း၊ ထန်းလျက် ဆယ်လုံးဆိုရင် ယုန်ဆယ်ကောင်ပေါ့ ။
ဒီလိုနဲ့ …တစ်နေ့မှာ ယုန်ပစ် ထွက်လာကြတယ် ။ မြားကိုးစင်း ၊ ယုန်ကိုးကောင် အထိကတော့ အဆင်ပြေနေတယ် ။ နောက်ဆုံး ဆယ်စင်းမြောက် မြားကို ပစ်လိုက်တဲ့ အခါ
ယုန်ကို မှန်သွားတာ တွေ့လိုက်တယ် ။ အမဲလိုက်ခွေးကလည်း ချက်ချင်း ယုန်နောက် လိုက်သွားတယ် ။ ဒါပေမယ့် အကြာကြီးနေမှ ခွေးဟာ မောပန်းပြီး ယုန်မပါဘဲ ပြန်ရောက် လာတယ် ။
မုဆိုးက စိတ်ကလည်း ဆိုး၊ မိန်းမကိုလည်း
ကြောက်ရတော့ ခွေး အသုံးမကျကြောင်း
ပြန်ပြောပြနိုင်ဖို့ သက်သေ အဖြစ် ကျန်တဲ့ ထန်းလျက်ခဲ တစ်လုံးကို ခွေးကို မကျွေးတော့ဘဲ ပြန်သိမ်းဖို့ လုပ်တယ်။
ခွေးကလည်း သခင့် အမူအရာကိုကြည့်ပြီး –
” မရက်စက်ပါနဲ့ သခင်ရယ် ။ ကျုပ်လည်း အဲဒီ့ယုန်ရဲ့ နောက်ကို ပြေးနိုင် သလောက် ပြေးပြီး လိုက်ခဲ့တာပါပဲ ။ စာနာပါ။ ညှာတာပါ။ ကျုပ်အပြစ်လို့ တစ်ဘက်သတ်ကြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ ” လို့ စိတ်ထဲကနေ စကားတွေ ပြောနေသတဲ့။
မြားချက်ထိပြီး ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ ယုန်အကြောင်း ကိုလည်း ပြောရဦးမယ်။
ဒဏ်ရာရ ယုန်ကလေးလည်း မောကြီး ပန်းကြီးနဲ့ မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေဆီ ပြန်ရောက်သွားတယ် ။ တခြား ယုန်ကလေးတွေ ကလည်း ” မြားချက်က အရေပြားကို ရှပ်ထိ သွားလို့ တော်သေးတာပေါ့၊ မသေကောင်း မပျောက်ကောင်းပဲ ” စသဖြင့် ဝိုင်းဝန်းအားပေးပြီး ယုန်ကလေးကို အပြေးသန်တဲ့ ခွေးလက်က ဘယ်လိုလွတ်လာတာလဲ လို့ မေးကြတယ်။
ပြေးလာလို့ ရောက်လာတာပေါ့ လို့ ဒဏ်ရာရ ယုန်ကလေးက ပြန်ဖြေတယ် ။ ကျန်တဲ့ယုန်တွေ ကလည်း ပြေးတိုင်း မရောက်တဲ့ အကြောင်း၊ ပြေးရင်းနဲ့ ခွေးပါးစပ် ရောက်သွားကြရတာ များကြောင်း ပြန်ငြင်းကြတယ် ။ ယုန်ကလေးက သူငယ်ချင်းတွေကို ကြည့်ပြီး ပြောပြတယ်။
” ဒီလိုကွ။ ခွေးက လိုက်ပြေး ပြေးတယ်။ ငါက ထွက်ပြေး ပြေးတယ် ။ ပြေးတာချင်းတော့ တူတယ်။ ပြေးပုံချင်း မတူဘူးကွ ”
ကျန်တဲ့ယုန်တွေက နားမလည်ကြလို့ ယုန်ကလေးက ထပ်ရှင်းပြတယ် ။
“ ဒီလို သူငယ်ချင်းတို့ရ .. ။ ခွေးက ပြေးနိုင်သလောက် ပြေးခဲ့တယ် ။ ငါက သူ့လို ပြေးနိုင်သလောက်ပဲ ပြေးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးကွ ။ အသားကုန် ပြေးခဲ့တာ´´
” ဟင် .. ဘယ်လို ”
” အေး .. ဟုတ်တယ် ။ ငါက အစွမ်းကုန် ပြေးခဲ့တာ။ ငါသာ ပြေးနိုင် သလောက်ပဲ ပြေးခဲ့ရင် ဒီချိန်ဆို တခြားယုန်တွေလို ရွာလယ်ဈေးမှာ အရောင်း ခံနေရလောက်ပြီကွ ”
နားထောင်နေကြတဲ့ ယုန်အားလုံးက ဒဏ်ရာရ ယုန်လေးရဲ့ ဒဿနကို ကြားရတဲ့အခါ အံ့သြသွား ကြတယ်။ ယုန်ကလေးက တစ်လုံးချင်း ဆက်ပြောတယ် ။
” ဟုတ်တယ်လေ … ။ ပြေးနိုင်သလောက်သာ ပြေးခဲ့တဲ့ ငါတို့ရဲ့ မြားချက်သင့် ယုန်တွေ အားလုံး သေဆုံးခဲ့ပြီးပြီ ။ ငါကတော့ သူများလို အသေ မခံနိုင်ဘူး။ ပြေးနိုင်သလောက်သာ ပြေးတဲ့ ခွေးနဲ့ အသားကုန်ပြေးတဲ့ ငါ … ။ အစွမ်းကုန် ပြေးခဲ့လို့ ငါ လွတ်မြောက်လာရတာ ။ ဒါကြောင့် ခွေးနဲ့ငါ ပြေးပုံချင်း၊ ပြေးနည်းချင်း မတူဘူးလို့ပြောတာ။ မင်းတို့လည်း တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အဲဒီမုဆိုးရဲ့ မြားချက် ထိလို့များ ပြေးနိုင်သလောက်သာ ပြေးကြမယ် ဆိုရင် သေဆုံးကြရဦး မှာပဲ။ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက်၊ ရှင်သန်ဖို့ အတွက်၊ အောင်မြင်ဖို့အတွက် အသားကုန် ပြေး၊ အစွမ်းကုန် ပြေး … ”
ဒီပုံပြင်မှာ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ ယုန်လေးက အရှုံးတရား တို့ရဲ့ နိမိတ်ပုံပါ ။ လူအများစုဟာ ဒဏ်ရာကို အကြောင်းပြု ပြီး ပြေးနိုင်သလောက် သာ ပြေးခဲ့ကြတယ်။ နောက်ဆုံး အမဲလိုက်ခွေးရဲ့ အစွယ်အောက်မှာ အသက်ဆုံးပါးခဲ့ကြ ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ပြေးနိုင်သလောက်ပဲ ပြေးမိနေတယ် ဆိုတာကို သတိမပြုမိကြပါဘူး။ တချို့များဆိုရင် စိတ်ဒဏ်ရာလေး နည်းနည်း ရလိုက်တာနဲ့ အိပ်ရာထဲတောင် ခွေခေါက် လဲသွားတတ်ကြတာပါ။
ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဒုက္ခတွေ ဆိုတာ မြားချက်တွေပါ။ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန် တစ်နေရာရာမှာ အဲဒီ့မြားချက်တွေရဲ့ ပစ်ခွင်းမှု ဒဏ်ကို လူတိုင်း ခံကြရ စမြဲပါ ။
အောင်မြင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ရလာတဲ့ ဒဏ်ရာကို ယိုးမယ် မဖွဲ့သင့် ပါဘူး။ ဒဏ်ရာနဲ့ အခက်အခဲ ဆိုတာ အောင်မြင်မှု အတွက် အခွင့်အရေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ ဒဏ်ရာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ရထားပါစေ မျှော်လင့်ချက်ကို မစွန့်လွှတ်သရွေ့ အောင်မြင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့် ရှိနေဆဲပါ ။
ပြဆိုခဲ့တဲ့ ပုံပြင်မှာ ဒဏ်ရာရ ယုန်သူငယ်ဟာ အသက် ရှင်သန်ခွင့် ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ မိမိ လုပ်နိုင်တာကို လုပ်နိုင် သလောက်တင် မဟုတ်ဘဲ အစွမ်းကုန် လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက် အသက်ရှင်သန်မှု ဆိုတဲ့ အောင်မြင်ခြင်းကို ရနိုင်ခဲ့တာပါ ။
•အခက်အခဲ ဆိုတာ အသိဉာဏ် ကြီးသူတွေ အဖို့ ယာယီ အတားအဆီးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
•ရှင်သန်ခြင်း ဆိုတာ မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့ နောက်ထပ် အဓိပ္ပါယ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
•အောင်မြင်ခြင်း ဆိုတာလည်း အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခြင်းရဲ့ ရလဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
•လူတွေရဲ့ဘဝမှာ ကြုံတွေ့လာရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ဆိုတာ မုဆိုးနဲ့ တူတယ်။ မြားချက်နဲ့ တူတယ်။ အမဲလိုက်ခွေးနဲ့ တူတယ်။
•အောင်မြင်မှုနဲ့ လွဲချော်နေသေး လို့ စိတ်ဓာတ် ကျနေသူတွေက မြားမှန်တဲ့ ယုန်ကလေးတွေ နဲ့ တူတယ်။ သူတို့နောက် မှာလည်း လောကဓံ ဆိုတဲ့ အမဲလိုက်ခွေးက အပြီး ကိုက်ဝါးမျိုပစ်ဖို့ တကောက်ကောက်လိုက်လို့ ..။
•မိမိတို့က အစွမ်းကုန် မဟုတ်ဘဲ ပြေးနိုင်သလောက်ပဲ ပြေးရင်တော့ ဟင်းတစ်ခွက်ပဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။
မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်ဖို့
ပြေး … ပြေး … အစွမ်းကုန် ပြေး … ။
Credit : ကိုကြယ်စင် ( ဗဟုသုတကြယ်စင် )
? ယုနျကလေးပေးတဲ့ ဒဿန
တဈခါက … မိနျးမ အလှနျကွောကျရတဲ့
ယုနျပဈမုဆိုး တဈယောကျ ရှိတယျ ။
မုဆိုးရဲ့ မိနျးမက သူ့ယောကျြားကို မယုံဘူး။
ရလာတဲ့ ယုနျအရအေတှကျကို တိတိ ကကြ သိနိုငျဖို့ မိုးလငျးပွီ ဆိုရငျ ယုနျပဈ ထှကျဖို့
? မွား ဆယျစငျး ၊ ထနျးလကျြ ဆယျလုံး ၊
ယုနျကောကျဖို့ အမဲလိုကျခှေး တဈကောငျ ?
ပွငျပေးထားလေ့ ရှိတယျ ။
ဆိုလိုတာက မုဆိုးက လကျ အရမျးဖွောငျ့တဲ့သူ ဖွဈလို့
မွားတဈစငျး ဆိုရငျ ယုနျတဈကောငျ မှနျလိမျ့မယျ ။
အမဲလိုကျခှေးကို သှားကောကျ ခိုငျးပွီး ဆုအဖွဈ
ထနျးလကျြ တဈလုံး ကြှေးရမယျ ။ မွားဆယျစငျး၊ ထနျးလကျြ ဆယျလုံးဆိုရငျ ယုနျဆယျကောငျပေါ့ ။
ဒီလိုနဲ့ …တဈနမှေ့ာ ယုနျပဈ ထှကျလာကွတယျ ။ မွားကိုးစငျး ၊ ယုနျကိုးကောငျ အထိကတော့ အဆငျပွနေတေယျ ။ နောကျဆုံး ဆယျစငျးမွောကျ မွားကို ပဈလိုကျတဲ့ အခါ
ယုနျကို မှနျသှားတာ တှလေို့ကျတယျ ။ အမဲလိုကျခှေးကလညျး ခကျြခငျြး ယုနျနောကျ လိုကျသှားတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အကွာကွီးနမှေ ခှေးဟာ မောပနျးပွီး ယုနျမပါဘဲ ပွနျရောကျ လာတယျ ။
မုဆိုးက စိတျကလညျး ဆိုး၊ မိနျးမကိုလညျး
ကွောကျရတော့ ခှေး အသုံးမကကြွောငျး
ပွနျပွောပွနိုငျဖို့ သကျသေ အဖွဈ ကနျြတဲ့ ထနျးလကျြခဲ တဈလုံးကို ခှေးကို မကြှေးတော့ဘဲ ပွနျသိမျးဖို့ လုပျတယျ။
ခှေးကလညျး သခငျ့ အမူအရာကိုကွညျ့ပွီး –
” မရကျစကျပါနဲ့ သခငျရယျ ။ ကြုပျလညျး အဲဒီ့ယုနျရဲ့ နောကျကို ပွေးနိုငျ သလောကျ ပွေးပွီး လိုကျခဲ့တာပါပဲ ။ စာနာပါ။ ညှာတာပါ။ ကြုပျအပွဈလို့ တဈဘကျသတျကွီး မဆုံးဖွတျပါနဲ့ ” လို့ စိတျထဲကနေ စကားတှေ ပွောနသေတဲ့။
မွားခကျြထိပွီး ဒဏျရာရသှားတဲ့ ယုနျအကွောငျး ကိုလညျး ပွောရဦးမယျ။
ဒဏျရာရ ယုနျကလေးလညျး မောကွီး ပနျးကွီးနဲ့ မိသားစု သူငယျခငျြးတှဆေီ ပွနျရောကျသှားတယျ ။ တခွား ယုနျကလေးတှေ ကလညျး ” မွားခကျြက အရပွေားကို ရှပျထိ သှားလို့ တျောသေးတာပေါ့၊ မသကေောငျး မပြောကျကောငျးပဲ ” စသဖွငျ့ ဝိုငျးဝနျးအားပေးပွီး ယုနျကလေးကို အပွေးသနျတဲ့ ခှေးလကျက ဘယျလိုလှတျလာတာလဲ လို့ မေးကွတယျ။
ပွေးလာလို့ ရောကျလာတာပေါ့ လို့ ဒဏျရာရ ယုနျကလေးက ပွနျဖွတေယျ ။ ကနျြတဲ့ယုနျတှေ ကလညျး ပွေးတိုငျး မရောကျတဲ့ အကွောငျး၊ ပွေးရငျးနဲ့ ခှေးပါးစပျ ရောကျသှားကွရတာ မြားကွောငျး ပွနျငွငျးကွတယျ ။ ယုနျကလေးက သူငယျခငျြးတှကေို ကွညျ့ပွီး ပွောပွတယျ။
” ဒီလိုကှ။ ခှေးက လိုကျပွေး ပွေးတယျ။ ငါက ထှကျပွေး ပွေးတယျ ။ ပွေးတာခငျြးတော့ တူတယျ။ ပွေးပုံခငျြး မတူဘူးကှ ”
ကနျြတဲ့ယုနျတှကေ နားမလညျကွလို့ ယုနျကလေးက ထပျရှငျးပွတယျ ။
“ ဒီလို သူငယျခငျြးတို့ရ .. ။ ခှေးက ပွေးနိုငျသလောကျ ပွေးခဲ့တယျ ။ ငါက သူ့လို ပွေးနိုငျသလောကျပဲ ပွေးခဲ့တာ မဟုတျဘူးကှ ။ အသားကုနျ ပွေးခဲ့တာ´´
” ဟငျ .. ဘယျလို ”
” အေး .. ဟုတျတယျ ။ ငါက အစှမျးကုနျ ပွေးခဲ့တာ။ ငါသာ ပွေးနိုငျ သလောကျပဲ ပွေးခဲ့ရငျ ဒီခြိနျဆို တခွားယုနျတှလေို ရှာလယျဈေးမှာ အရောငျး ခံနရေလောကျပွီကှ ”
နားထောငျနကွေတဲ့ ယုနျအားလုံးက ဒဏျရာရ ယုနျလေးရဲ့ ဒဿနကို ကွားရတဲ့အခါ အံ့သွသှား ကွတယျ။ ယုနျကလေးက တဈလုံးခငျြး ဆကျပွောတယျ ။
” ဟုတျတယျလေ … ။ ပွေးနိုငျသလောကျသာ ပွေးခဲ့တဲ့ ငါတို့ရဲ့ မွားခကျြသငျ့ ယုနျတှေ အားလုံး သဆေုံးခဲ့ပွီးပွီ ။ ငါကတော့ သူမြားလို အသေ မခံနိုငျဘူး။ ပွေးနိုငျသလောကျသာ ပွေးတဲ့ ခှေးနဲ့ အသားကုနျပွေးတဲ့ ငါ … ။ အစှမျးကုနျ ပွေးခဲ့လို့ ငါ လှတျမွောကျလာရတာ ။ ဒါကွောငျ့ ခှေးနဲ့ငါ ပွေးပုံခငျြး၊ ပွေးနညျးခငျြး မတူဘူးလို့ပွောတာ။ မငျးတို့လညျး တဈနနေ့ေ့ တဈခြိနျခြိနျမှာ အဲဒီမုဆိုးရဲ့ မွားခကျြ ထိလို့မြား ပွေးနိုငျသလောကျသာ ပွေးကွမယျ ဆိုရငျ သဆေုံးကွရဦး မှာပဲ။ လှတျမွောကျဖို့ အတှကျ၊ ရှငျသနျဖို့ အတှကျ၊ အောငျမွငျဖို့အတှကျ အသားကုနျ ပွေး၊ အစှမျးကုနျ ပွေး … ”
ဒီပုံပွငျမှာ ဒဏျရာရနတေဲ့ ယုနျလေးက အရှုံးတရား တို့ရဲ့ နိမိတျပုံပါ ။ လူအမြားစုဟာ ဒဏျရာကို အကွောငျးပွု ပွီး ပွေးနိုငျသလောကျ သာ ပွေးခဲ့ကွတယျ။ နောကျဆုံး အမဲလိုကျခှေးရဲ့ အစှယျအောကျမှာ အသကျဆုံးပါးခဲ့ကွ ပါတယျ။ ကိုယျကိုယျတိုငျလညျး ပွေးနိုငျသလောကျပဲ ပွေးမိနတေယျ ဆိုတာကို သတိမပွုမိကွပါဘူး။ တခြို့မြားဆိုရငျ စိတျဒဏျရာလေး နညျးနညျး ရလိုကျတာနဲ့ အိပျရာထဲတောငျ ခှခေေါကျ လဲသှားတတျကွတာပါ။
ဘဝမှာ ကွုံတှရေ့တဲ့ ဒုက်ခတှေ ဆိုတာ မွားခကျြတှပေါ။ တဈနနေ့ေ့ တဈခြိနျခြိနျ တဈနရောရာမှာ အဲဒီ့မွားခကျြတှရေဲ့ ပဈခှငျးမှု ဒဏျကို လူတိုငျး ခံကွရ စမွဲပါ ။
အောငျမွငျမှုကို ပိုငျဆိုငျခငျြရငျ ရလာတဲ့ ဒဏျရာကို ယိုးမယျ မဖှဲ့သငျ့ ပါဘူး။ ဒဏျရာနဲ့ အခကျအခဲ ဆိုတာ အောငျမွငျမှု အတှကျ အခှငျ့အရေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘဝမှာ ဒဏျရာတှေ ဘယျလောကျပဲ ရထားပါစေ မြှျောလငျ့ခကျြကို မစှနျ့လှတျသရှေ့ အောငျမွငျမှုကို ပိုငျဆိုငျနိုငျခှငျ့ ရှိနဆေဲပါ ။
ပွဆိုခဲ့တဲ့ ပုံပွငျမှာ ဒဏျရာရ ယုနျသူငယျဟာ အသကျ ရှငျသနျခှငျ့ ဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြကို မစှနျ့လှတျဘဲ မိမိ လုပျနိုငျတာကို လုပျနိုငျ သလောကျတငျ မဟုတျဘဲ အစှမျးကုနျ လုပျခဲ့တဲ့ အတှကျ အသကျရှငျသနျမှု ဆိုတဲ့ အောငျမွငျခွငျးကို ရနိုငျခဲ့တာပါ ။
•အခကျအခဲ ဆိုတာ အသိဉာဏျ ကွီးသူတှေ အဖို့ ယာယီ အတားအဆီးသာ ဖွဈပါတယျ။
•ရှငျသနျခွငျး ဆိုတာ မြှျောလငျ့ခွငျးရဲ့ နောကျထပျ အဓိပ်ပါယျ တဈခု ဖွဈပါတယျ ။
•အောငျမွငျခွငျး ဆိုတာလညျး အစှမျးကုနျ ကွိုးစားခွငျးရဲ့ ရလဒျပဲ ဖွဈပါတယျ ။
•လူတှရေဲ့ဘဝမှာ ကွုံတှလေ့ာရတဲ့ အခကျအခဲတှေ ဆိုတာ မုဆိုးနဲ့ တူတယျ။ မွားခကျြနဲ့ တူတယျ။ အမဲလိုကျခှေးနဲ့ တူတယျ။
•အောငျမွငျမှုနဲ့ လှဲခြျောနသေေး လို့ စိတျဓာတျ ကနြသေူတှကေ မွားမှနျတဲ့ ယုနျကလေးတှေ နဲ့ တူတယျ။ သူတို့နောကျ မှာလညျး လောကဓံ ဆိုတဲ့ အမဲလိုကျခှေးက အပွီး ကိုကျဝါးမြိုပဈဖို့ တကောကျကောကျလိုကျလို့ ..။
•မိမိတို့က အစှမျးကုနျ မဟုတျဘဲ ပွေးနိုငျသလောကျပဲ ပွေးရငျတော့ ဟငျးတဈခှကျပဲ ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ ။
မြှျောမှနျးခဲ့တဲ့ ပနျးတိုငျကို ရောကျရှိနိုငျဖို့
Credit : ကိုကွယျစငျ ( ဗဟုသုတကွယျစငျ )
Previous postThe Right People,in the Right Place, at the Right Time